Xalka khilaafka ka taagan guddiyada doorashooyinka - Caasimada Online
Home Maqaalo Xalka khilaafka ka taagan guddiyada doorashooyinka
Xalka khilaafka ka taagan guddiyada doorashooyinka
By Mohamed Abukar Isak
Shirar kala duwan oo ka kala dhacey magaalooyinka Dhuus-mareeb iyo caasimadda dalka ee Mogadishu, waxaa la isla af gartey in dalka ay ka dhacdo doorasho dadban, oo ergo dooran doonaan xildhibaanada Gollaha shacabka, halka xillibaanada aqalka sarena maamulada dalka soo dooran doonaaan.
5ta Nofeember, markii guddiyada doorashooyinka lagu dhawaaqey, saacado ka dib waxaa ka hadley mucaaradka dalka iyo siyaasiyiin kale oo kamid yahay gudoomiyada xisbiga Wadajir Abdirahman Abdishakuur Warsame, iyo Xisbiga Midowga Nabadda iyo Horumarka ee uu Hassan Sheikh Mohamuud hogaamiyo, oo ay sheegeen in xubnaha guddiga doorashooyinka ay kamid noqodeen saraakiil ka tirsan hey’adda Nabad sugidda dalka oo magaceeda loo soo gaabiyo “NISA”. Intaas ka bacdina waxaa isa soo tarey eedo loo jeedinayo xukuumadda oo ku saabsan arinta guddiyada doorashooyinka iyo xalinta Khilaafaadka.
Dhanka kale xukuumada ayaa diidey iney wax ka bedesho Guddiyada doorashooyinka, sheegteyna iney doorashada sidaan ku dhici doonto, sheegteyna in loo hogaansamo awaamirtaguddiyadan ay bixiyaan.
Waxaa weli taagan dooda guddiyadan doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka, iyadoo maalintii shaley (21/11/2020) shir u furmey xisbiyada mucaaradka kuwooda ugu caasan iyagoona ka tashanaya waxa laga yeeli lahaa guddiyadan iyagoo horena baaqyo soo kala direy sheegeyna inaan lagu qanci doonin doorasho qaabkan ku dhacda. welina lama oga xalka kama dambeyska ah ee ay soo saari doonaan maalmaha soo socoda.
HADIIBA AY ARINTU SIDAAN U CAKIRANTAHAY MAXAA XAL AH?
“Dowladu si bey wax u dooneysaa, mucaaradkuna sikale uuyuu wax u doonayaa”
Xaaladu markey sidaas tahay dhaqanka Soomaaliga waxaa uu isku dayaa in xal loo heloarimahan oo kale; iyagoo waan waan kabilaaba labada koox dhexdooda, iyagoo fiirinaayadanta guud ee dalka iyo abuurista jawi nabadeed iyo is aaminaad oo ka dhex dhalatadadyowga Soomaaliyeed.
Maamul ahaan dowlada Soomaaliya waxey ka kooban tahay saddex qolo oo kala ah:
1- Kuwa hadda maamulka haya
2- Kuwo mucaarad ah oo xil–doon ah
3- Bulshada Rayidka
Si dhibaatadan loo xaliyo Bulshada Rayidka ayaa ugu dhow in ey xaliyaan doodaha ceenkanah. Bulshada Rayidku waxaa ay isgu jiraaan Culimaa’udiin, Aqoon yahano, iyo Odey-dhaqameedyo metelaya dadka Soomaaliyeed dhamaantooda.
Sida caadada inoo ah bulshada Soomaaliyeed waxaa ay si dhab ah u taageeraan bulshadooda rayidka ee qumman. (Maqaalku kama hadlayo Shiikh Dowladeed iyo Aqoon yahan Jeebsiyaasi ku jira) wuxuu ka hadlayaa Bulshada rayidka saxda ah ee la wada yaqaano oo bulshada iskeeda u dooratey.
Saddexdan qeybood ee Bulshada rayidka oo aan kor ku soo sharxey waxaa wada aamini karalabada kooxood oo isku haaya sida loo qaban lahaa doorasho lagu wada qanacsanyahy iyagoodoorkooda xalinta xilaafaadka ciyaaraya.
Dowlad Soomaaliya waxaa u furan iney Guddiyadan kasoo magacawdo Bulshada Rayidka eewadartu ogoshahay, iyagoo ilaalinaya is aaminaada bulshada iyo sharciyadda dowladdaladhisi doono.
Bulsho rayid goormee kaalin fiican ka qaateen doorka dowladnimo ee Soomaaliya?
1- Doorkoodii Gumeysi ladirirka ahaa, sidda dhalinyartii SYL sanadahoodi hore
2- Doorkii culimadii Soomaaliyeed ee kahortaga sharciga qoyska (Family Law)
3- Nabad raadintii iyo wacyi gelintii bulshada Soomaaliyeed bur-burka kadib
4- Dowlad dhisidii 2012 lagu dhisey dowlad Federaaal ah IWM.
Doorasho kasta waxey u baahan tahay iney sharciyad ku dhisanaayo, taaas oo loo wadasimanyahay. Sinaan hadii meesha kabaxdo waxaa meesha ka baxaaya kalsoonida bulshadaiyo aqbalaada natiijada doorashada. Waxaa kaloo aad u muhiimsan in laxoojiyo doorkabulshada rayidka ee dowlad dhisida Soomaaliyeed.
Mohamed Abukar Isak – Waa cilmi baare madax-bannaan. Waxaad kala xiriiri kartaa Email m.abukar.isak@gmail.com